Xildhibaanow xaggeed Taariikhda ka geli? | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Xildhibaanow xaggeed Taariikhda ka geli?
09/09/2012 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Waxaa maanta shaki ku jirin in Soomaaliya ay gelayso xilli taariikhi ah oo in badan oo Soomaaliya aysan filaynin inay arki doonaan iyaga oo nool, oo waxaa aad looga niyad jabsanaa in la akri doono Soomaali oo dalkeeda ku qabsata sida wadamada kale howlaheeda dowladnimo oo ay ugu horeyso, dhissidda iyo doorashooyinka madaxdooda.
Waxaa maanta meesha ka baxday fikirkii aadka u foolka xumaa ee in muddada ah la soo karkarinayay ee ku sheegayay dadka Soomaaliyeed inay yihiin kuwo aan lagu aamini karin inay qabtaan doorashooshin heer qaran ah, oo mar kasta oo iskuday la sameeyaba loola carari jiray wadamo kale oo iyagu soo dhoodhoobi jiray wixi ay rabaan, maanta waxey joogtaa in musharixiinta Soomaaliyeed iyo kuwa dooranaayaba ay joogaan caasimaddii Soomaaliya MUQDISHO iyagoo si aan horay loo arkin u gudo galay inay soo xulaan madaxdii dalka shanta sano ee soo socota lagu aamini lahaa.
Waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, qaasatan kuwooda ku howlan horumarinta ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin dal iyo dibadba, waxaanse si qaas ah aan ugu mahad celinayaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Pro Jawaari oo inta uu xilka hayay runtii qabtay howlo la isku laheyn karo kana duwan howlihii lagu yiqiinay kuwii jagadaas isaga uga horeeyay, waxaana lee yahay ilaahey ha la garab galo xilka aadka u qiimaha badan oo uu ummadda Soomaaliyeed u hayo, ilaaheyna ha ka dhigo kii qeyb ka qaata soo celinta sharaftii ummadda Soomaaliyeed, waxaana kula dardaarmayaa inuusan weligiis qeyb ka noqon qolo gooni ah oo uu ahaado mid u dhexeeya una gargaara danaha dadka Soomaaliyeed, difaacana aayaha jiilalka soo socda. Prof Jawaari, waxaa maanta gacanta kuugu jira fursad taariikhi ah oo keeni karta in mustaqbalka taariikhda Soomaaliya lagu baran doono, lagu xuso waxa aad qabato ee ha yeelin wixii ay yeeli jireen kuwii wax magaradka ahaa ee dalka iyo dadkaba dib u dhigay.
Waxaan kaloon rabaa inaan halkaan uga hambalyeeyo Mudanayaasha baarlamaanka ee sida xaqqa ah ku yimid oo aan iyagu qeyb ka noqon suuqii kala gadashada jagada ka mid noqoshada baarlamaanka, oo ay dadkoodu u soo xuleen una garteen inuu yahay qofka ugu mudan ee sida xeerku ahaa heybtiisu ay tayada iyo waxtarka ku soo doorteen. Mudade waxaan ku lee yahay ilaahey ha kuu fududeeyo xilkaan qiimaha badan ee aad u qaaday ummadda Soomaaliyeed oo aad ku matalayso dadkii kuu soo xulay, waxaanse rabaa inaan hoosta kaaga xariiqo in danta dadka aad metesho ay ku irto danta dadka Soomaaliyeed oo aad ka shaqeyso waxa Soomaali dan u ah, oo aadan fiirin wax yar oo maanta kuu muuqda balse aan waxba u noqon ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. Waxaan hubaa wax kasta oo sharaf u ah Soomaali inay sharaf u tahay dadka aad metesho. Waxaa lagaa rabaa inaad dadka iyo dalka aad u shaqeyso oo aadan ka shaqeysan. Waxaa lagaa rabaa inaad u ekaado mudane baarlamaan oo aadan noqon xoolo suuq yaalla oo uu gato midkii ugu lacag badnaada. Ogow waa laga bixi sidi la yahay ee wax reebo si wax laguu reebo. Ka gal taariikhda baal dahabi ah adoo ilaahey raaligelinaaya una daneynaya dadkii ku soo aaminay iyo dhamaan dadka Soomaaliyeed.
Waxaan kaloon rabaa inaad laba eray iraahdo mudanaayasha xaqdarradda ku soo galay baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed, oo iyagu boobay dadkii xil kaska ahaa oo ay dadkoodu u doorteen inay xilalkaas u qabtaan. Haddii aad u heysato inaan lagu ogeyn ogow in lagu og yahay. Haddii aad tahay qof ay ku danbeyso wax dadnimo ah, fadlan iska casil xilkaas ee sii weliba midkii ay reerkaadu u soo xuleen, waayo haddii aad boobayso dadkaadii u maleymaayo inaad dal iyo dad aad wax u reebayso, ee ilaahey ka cabso ee si xun wax ku raadiska ka bax, inta ay goori goor tahay, haddii aad yeeli weyso waxaa hubanti ah inaan meeshaas lagaaga heri doonin oo ummadda aad meteshaahi ay go’aan kaa qaadan doonaan maadaama ay iyagu xaq u lee yihiin inay soo magacaabaan qofkii meteli lahaa. Haddii aad adigu tahay kii bedelay dagaal oogayaashii oo aad lacag iyo si xun wax ku raadis aad ku doonayso inaad dadka ku afduubtana, ogow in Soomaali ku og tahay oo aan cid dan ka leh aysan jirin inaad xilkaas sii heyso iyo in kale. Fadlan is fiiri ee dib uga noqo ficilladda guracan ee aad ku dhaqaaqday, haddii aad diidana ogow in taariikh fool xun aad meesha kala tegi doonto. Fadlan inta ay goori goor tahay u celi xilkaas qofkii ay heybtaadu u magacawday, kolay Soomaali waxba ka sugimaydo kuwo dadkii ay ka dhasheen wax ku aamini waayeene.
Guntii iyo gabagabadii, waxaa hubanti ah in maanta ay tahay maalin taariikhi ah loona baahan yahay in xildhinaada Soomaaliyeed ee fursadda u helay inay taariikhda wax ku soo kordhiyaan ay ka fikiraan musharaxa ay u codeen doonaan maalinta Isniinta. Waxaa gacantiinna ku jira haddii aad ogtihiin iyo haddii kalaba mustaqbalkii aabahaa, hooyadaa, walaalkaa, walaashaa, ilmahoodii, xaaskaada, ilmahaada, ilmahaada ilmahooda iyo weliba mustaqbalkaadii, fadlan ha ku iibsannin wax yar oo aad heli karto haddii uu ilaahey kuu qoray.
Fahan oo weliba ka shaqee sidii ummadda Soomaaliyeedi uga bixi laheyd mugdiga una gaari laheyd isku tashi dhinac kasta ah. Wax kastana waxa ay maanta ku xiran yihiin, ilaahey ka sokow, hogaanka aad maanta ummadda u doortaan iyo weliba howl kasnimadiisa. Ma qabo inay sax tahay inaan musharax gooni ah aan halkaan ka magacaabo, balse waxaa hubanti ah in musharixiintu ay kala duwan yihiin oo ay jiraan kuwo laga filan karo waxa ay sheegayaan iyo kuwo aanan looga baran wax qabad.
Maadaama xildhibaanow codkaadu maanta qiimahaas ummadda u lee yahay ka fikir mustaqbalka fog, u hiilli dadkii ku soo dirsaday oo u door madaxweyne ka fayow wixii dib noo dhigay, oo garan kara inuu Soomaali oo dhan madaxweyne u yahay. Madaxweyne fahmi kara waxa ay tahay howshiisu oo awooda inuu naftiisa ka adkaado, oo la shaqeeya heyadaha kale ee dalka, oo haddii uu isfahanwaa yimaado tiisa ka hormariya tan dadka iyo dalka, kuna sabri kara xaaladaha adag ee sugaaya. Madaxweyne heshiis wax u raadiya oo aan qori kaliya xal ku raadin. Madaxweyne ummaddiisa u shaqeeya oo aanan ka shaqeysan. Madaxweyne aan looga cabsan waxa ummadda loogu soo dhiibay. Ilaahey waxaan ka baryeynaa inuu noo dooro kuwo ay ku weyn tahay cabsidiisa aaminsanna in cadaaladu ay sal u tahay horumarka ummadda oo wax walba ka hormariya danaha dadka ay madaxda u yihiin.
« Ma dooran laheyd Madax aan Mudnayn?
Dal Tabyo, dood ku saabsan doorashooyinka madaxweynaha. »